September 2020 - NepalTrending
No Comments on विदेशवाट श्रीमान घर आउँदा श्रीमतीको ९ महिनाको ग र्भ देखेपछि भयो बवाल (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on जिबित देबि कुमारीको दर्शन गर्दै हेर्नुस आजको राशिफल दुख कहिलै पर्दैन ! असोज ०५ गते । सोमबार
ज्योतिषि गणेश काफ्ले । वि.सं.२०७७ साल असोज ०५ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर २१ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्री शाके १९४२ । अधिक आश्विन शुक्लपक्ष । तिथि– चतुर्थी ,०४ घडी १३ पला,बिहान ०७ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त पञ्चमी । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ५१ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५९ मिनेट । विश्व शान्ति दिवस ।
मेष : व्यवसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक यात्रा हुनेछ । व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने समय रहेकोछ । पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा सुधार भएर जाने तथा नतिजा आफै तिर ल्याउन सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा सामेल भई स्वा’दिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । नया ठाउमा नया नियूक्ति तथा काम गरिरहेको ठाउमा बढोत्तरि हुने योग रहेकोछ । प्रे’ममा नजिक भई रमाउन सकिनेछ ।
बृष : व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । पुरानो रोग तथा सम’स्याहरु स्वत ठिक भएर जाने छन् । मामा तथा मावलि बाट तपाईको काममा सहयोग हुने छ । पढाइ लेखाइमा अरु भन्दा अग्र पंतिमा तपाईको नाम आउनेछ । अदालतबाट आउने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने हुनाले एक किसिमको उमङग शरिरमा आउनेछ । माया प्रे’ममा नजिक भई रमाउन सकिनेछ ।
मिथुन : समय राम्रो रहेकोले थोरै समयमा उपलव्धि मुलक कामहरु बन्नेछन् । प्रयत्न गर्दा आटेका तथा चाहेका कामहरु बन्ने हुनाले आर्थिक अवस्था उत्तम हुने छ । चिट्ठा पर्ने तथा नसोचेका धन स’म्पति हात लागि हुनेछ । पढाई लेखाई कै सन्द्रर्भमा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने नोकरिमा पदोन्नति हुने योग रहेकोछ । सन्तान तथा आ’फन्तको सहयोग पाउँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
कर्कट : राजनीति तथा समाज सेवामा परिश्रम गरे अनुसार पद प्रतिष्ठा पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुने छ । व्यापार व्यावसायमा म’नग्गे धन आर्जन गर्न सकिने तथा कृषि तथा प’शुपालन व्यावसायमा समय लगानि गर्नेहरुले भने जस्तो आम्दानि गर्न सक्नेछन् । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने पति प’त्नि बिच मा’याको डो’रो क’सिलो भएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ ।
सिहं : नयाँ काम गरि मनग्गे धन तथा सम्पति जोड्न सकिनेछ भने उद्योग, व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ। मापा प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पति प’त्नि बिच एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। आट, प’रा क्रम गर्न नडा’राई अगाडि बढ्ने हो भने चाहेको ग’न्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । विवाद तथा हुलमुलका बिच पनि राम्रा तथा परिणाम मुखि काम गर्न सकिनेछ ।
कन्या : धनस्थानमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले नया प्रकृतिको व्यावसायमा लगानि गर्दा प्रशस्त धन तथा भौतिक बस्तुहरु जोड्न सकिनेछ । काउन्सेलिङ, मोटिभेसन, सञ्चार पेशा व्यावसायमा समय खर्चिनेहरुका लागि समयले साथ दिने छ । सामा जिक तथा पारिवारिक स’म्बन्ध सुदृड हुनेछ । मनपर्ने भोजन, उत्तम बस्त्र तथा बि’लाशी बस्तुको प्रयोग गर्न पाईने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । लामो समयदेखि भे’टघाट नभएका मित्रहरु भ्ेटिने योग रहेकोछ ।
तुला : भौतिक बस्तुको प्रयोग गर्न पाईने तथा राम्रा पहिरनमा सजिएर अरुको मन लोभ्याउँन सकिने छ । तपाईबाट राम्रा काम हुने हुनाले परिवार तथा साथिभाईहरु खुसि हुँने छन् । पढाई लेखाईमा सुधार गरि नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउँन सकिनेछ । राजनिति तथा समाज सेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहनेछ । नौलो प्रकृतिको काम गरेर आम्दानिका स्रोत बढाउँन सकिनेछ भने व्यापारमा आजको दिन लगानि गर्नाले पछिसम्म लाभ मिल्नेछ ।
बृश्चिक : धा’र्मिक तथा सामाजिक काममा सक्रिय रहदा रहदै दिन बित्नेछ । आर्थिक अवस्था सुदृड बनाउन गरिएका पेशा व्यावसाय स्वत स्फुर्त रुपमा सञ्चालन हुने हुदा दैनिक खर्च सजिलै धान्न सकिनेछ भने केहि रकम बचत गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा अलि बढि समय खर्चिने हो भने नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । माया प्रे’ममा एक अर्काला बुझ्न समय लागेपनि सम्बन्ध प्रगाड हुनेछ ।
धनु : व्यापार व्यावसायमा लगानि गरे पनि आम्दानि कम हुनेछ । नयाँ ठाउँबाट लगानिको प्रश्ताब आएपनि केहि समय कुर्नुनै पर्नेछ । ईच्छा आकाक्षाहरु पुरा गर्नको लागि बढिनै समय खर्चनु पर्ने हुन सक्छ। दाजुभाई सँग म’नमु टाब सिर्ज ना हुने योग रहेकोछ । सामान्य स्यास्थ्यमा स’मस्या आई रुपैया पैसा खर्च हुनेछ । माया प्रे’ममा सामान्य म’नमु टाब सिर्जना हुनेछ भने आत्मिय मित्र तथा आफन्त सँग घरायसि कुरामा राज बाजिनेछ ।
मकर : बिभिन्न ठाउँबाट कामका प्रस्तावहरु आउनेछन् भने प्रसस्त रुपैया पैसा कमाउने योग रहेको छ । व्यस्तताका बाबजुत पनि उपलब्धि मुलक कामहरु गर्न सकिने ग्रहयोग रहेको छ। भनेको समयमा सामाजिक कामहरु बन्ने हुनाले छोटो समयमा नाम तथा दाम कमाउँन सकिने हुँदा घर परिवारमा खुसियालि छाउनेछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ । नयाँ नयाँ कामको प्र’स्ताब आउनेछ भने नोकरिमा पदोन्नति हुनेछ ।
कुम्भ:आ’कस्मि क धन सम्पति प्राप्त हुनेछ भने नसोचेको धन तथा सम्पति हात लाग्ने योग रहेकोछ। सम’स्याहरुको सजिलै समाधान गरि उपलब्धिमुक कामहरु गर्न सकिनेछ। अध्ययन अनुशन्धानमा सोचेभन्दा राम्रो प्रगति हुँन तथा नयाँ कुरा पत्ता लगाउँन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि बाट भनेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
मीन : नसोचेको धन तथा सम्पति हात लागि हुनेछ भने चिट्ठा प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । आफन्त तथा दिदि बहिनिबाट सहयोग तथा समर्थन पाईनेछ । सुभचिन्तकको सुझाबलाई शिरोधार्य गर्दै अगाढि सके फाईदा हुनेछ। माया प्रे’ममा नजिक भई आफ्ना कुराहरु राख्न सकिनेछ । प्रयत्न गर्दा पदिय जिम्मेवारि प्राप्त हुनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
No Comments on सागमा पदक दिलाउने खेलाडी सरकारको पदकबाट टाढा
काठमाडौं-विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका बावजुत पनि सरकारले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनायो । दिवसको अवसरमा राष्ट्रलाई योगदान पु¥याएका केही मानिस विभूषित भए । नेतृत्व तहका पदाधिकारी पदकबाट विभूषित हुँदा नेपालमा सम्पन्न १३औं सागमा पदक दिलाउने खेलाडी भने पदकबाट टाढा रहेका छन ।
दक्षिण एसियाकै मेगा इभेन्ट मध्येको सागबाट पदक दिलाउँदै देशको गरिमा उच्च बनाएका खेलाडीलाई पदकबाट सम्मान नगरिनु खेलाडीलाई उपेक्षा भएको कतिपयको टिप्पणी रहेको छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट १९ जना खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु पदक तथा विभूषणबाट विभूषित भएका छन् ।
तर खेललाई नै जिवन दिएर राष्ट्रका लागि पदक दिलाउन लक्ष्य राखेका खेलाडीलाई विभूषित नगरेको भन्दै आइतबार एनएनआईपिए, नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको विज्ञप्ती पनि जारी गरेको छ । राखेपले १३औं सागका ५१ स्वर्ण पदक विजेता र १७ प्रशिक्षकलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
No Comments on बलिउड अभिनेत्री कङ्गना राणावतको ठुलो झुट पर्दाफास
No Comments on बर्षौ पछि नेपाल आएको दुई रेल भारत फर्किए, फेरि कहिले आउँछन् टुङ्गो छैन !
काठमाडौं:शुक्रबार भारतबाट जनकपुर ल्याइएका नेपालका दुई वटा रेल शनिबार भारततिरै फर्किएका छन्। रेल ल्याएर आएका भारतको कंकोण रेलवे कर्पोरेसनका कर्मचारीहरूले शनिबार दुबै रेल भारत लिएर गएका हुन्। ‘उहाँहरू दिउँसो १२ बजेतिर रेल लिएर यहाँबाट जानुभएको हो,’ रेलवे तथा मेट्रो विकास कार्यालयका जनकपुरका इन्जिनियर विनोद ओझाले सेतोपाटीसँग भने,’अब ती रेल जयनगरको स्टेशनमा राखिनेछ।’
शुक्रबार दुई जना ड्राइभर र दुई जना सहायक ड्राइभरले रेल नेपाल ल्याएर आएका थिए । नेपाललाई रेल हस्तान्तरण गर्न कंकोणका अरू १६ जना कर्मचारी पनि त्यही रेलमा जनकपुर आएका थिए । नेपालमा रेल चलाउने कर्मचारी र कानुन नभएकाले उनीहरूले आज रेल भारततिरै लिएर गएका हुन्। जयनगरमा नेपालको आफ्नै स्टेशन छ। सोही स्टेशनमा अब ती रेल राखिनेछन्।
सधैँ बन्द भएर इन्जिन नबिग्रियोस् भनेर बेलाबेलामा इन्जिन चलाइरहनु पर्छ। इन्जिनको हेरचाहसँगै रेलको अन्य सुरक्षा कंकोण कम्पनीले नै गर्ने ओझाले बताए। ‘यतातिर लिक पनि मेन्टिनेन्स गर्नु पर्नेछ, अब दुई महिनाभित्र फेरि रेल नेपाल आउँछ कि,’उनले भने। जयनगर-जनकपुरमा रेल चलाउन लिकको मेन्टिनेन्सभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारी र कानुन नै छैन।
रेल्वे विभागले भदौ २९ गते रेल चलाउन १ सय ३० जना कर्मचारीको विज्ञापन खुलाएको छ।उक्त विज्ञापनको पदपूर्ति भएपछिमात्र रेल चलाउने कर्मचारी हुनेछन्। त्यसमा पनि ड्राइभर, सहायक ड्राइभरजस्ता प्राविधिक कर्मचारी भने तत्कालका लागि भारतबाट ल्याउनु पर्नेछ। ‘उताबाट केही समयका लागि प्राविधिक कर्मचारी ल्याउनेबारे हामी नेगोसियसन गरिरहेका छौं, ‘विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने।
रेल चलाउन अर्को समस्या कानुनको छ। रेलका सामान कसैले चोर्‍यो वा कुनै दुर्घटना भयो भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले कानुन बिना रेल चलाउन गाह्रो देखिएको छ । यस अघि जयनगर-जनकपुर रेल चलाउन २०१९ मा एउटा निकै छोटो कानुन थियो । उक्त कानुन अहिले सान्दर्भिक नभएकाले सरकारले रेल सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ। गत पुसमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पास नभएकाले रेल चलाउन समस्या देखिएको हो।
No Comments on संसारकै सबैभन्दा अग्लो टावर बुर्ज खलिफामा नेपालको झण्डा झलमलायो
युएई। छैटौं संविधान दिवसको अवसरमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईस्थित संसारकै सबैभन्दा अग्लो टावर बुर्ज खलिफामा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा झलमलाएको छ। नेपालको झण्डा हेर्न थुप्रै नेपालीहरु बुर्ज खलिफा र एड्नोक हेट अफिस भवन आवुधावी पुगेका थिए।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७७ को सुखद अवसरमा आज साँझ ८ः१५ बजे दुबईस्थित संसारकै सबैभन्दा अग्लो टावर बुर्ज खलिफा र ८ः०० बजे अबुधाबीस्थित एड्नोक हेट अफिस भवनमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा १ मिनेट झल मलाइएको हो। संसार कै सबैभन्दा अग्लो टावर वुर्ज खलिफामा तोकिएको समयभन्दा १५ मिनेट ढिलो नेपाली राष्ट्रिय झण्डा झलमलाएको थियो।
युएईस्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा गतवर्ष पनि संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसमा बुर्ज खलिफा र एड्नोक हेड अफिस भवन आवुधावीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा झलमलाइएको थियो। युएई सरकारले निशुल्क नेपाली राष्ट्रिय झण्डा झलमलाइ दिएकोमा नेपाली दूतावासले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। बुर्ज खलिफामा उचाई ८२९।८ मिटर रहेको छ।
हेर्नुहोस आज असोज ०४ गते को राशिफल : यी राशिहरुका लागि शुभ छ आइतबार !
No Comments on हेर्नुहोस आज असोज ०४ गते को राशिफल : यी राशिहरुका लागि शुभ छ आइतबार !
ज्योतिषि गणेश काफ्ले : वि.सं.२०७७ साल असोज ०४ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर २० तारिख । नेपाल संवत् ११४० । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४२ । अधिक आश्विन शुक्लपक्ष । तिथि–तृतीया ,१० घडी २६ पला,बिहान ०९ बजेर ५८ मिनेट उप्रान्त चतुर्थी । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ५१ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ०० मिनेट ।
मेष : अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछि पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ । माया प्रे’म गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय ब्यातित गर्दा खुसि भएको महशुस गर्नेछन् । रमाईलो यात्राको तय हुने तथा व्यापारबाट मनग्गे नाँफा कमाउँन सकिनेछ । साझपख गोप्य सुचनाहरु बहिरिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । मनोबल कमजोर हुने हुनाले बिद्या तथा प्र्रतिश्पर्धामा अरु भन्दा पछि परिनेछ ।
बृष : ईष्टमित्र तथा आफन्तका साथ रमाईलो यात्राको अवसर जुर्ने तथा मिठा मिठा परिकार ग्रहण गर्दै दिन कटाउँन सकिनेछ । अ’दालति निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने तथा सत्रु परास्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रतिष्पर्धामा प्रतिश्पर्धि को मनोबल गिराउदै सकारात्मक उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हल भएर जाने तथा पुराना लेनदेनका मु’द्दाहरु किनारा लाग्नेछन् । अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुनुको साथै पुरस्कार जित्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि बढाई आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँदै लान सकिनेछ ।
मिथुन : आफ्नो ज्ञानलाई सहि समयमा प्रयोग गर्न सकिने हुदा चुनौति पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । बौद्धिकताको प्रतिष्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ भने भनेजस्तो पारिश्रमिक पाउदा मन प्रफुल्लित हुने छ । मन परेको मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सम्पति पाउने योग रहेकोछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रसँग पेशाबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ । सन्तान तथा छोराछोरीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ ।
कर्कट : अध्ययन तथा अध्यापनमा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढिनै मेहनेत गर्नु पर्नेछ। आमा तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सल्लाह तथा सुझाब पाईने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट राम्रो आम्दानि हुनेछ। समाजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईको काम देखि सबै खुसि हुनेछन्। राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले सर्बसाधारण सँग सन्तुतिल व्यबहार गर्नुहोला काम बिग्रने हुँदा मान सम्मानमा कमि हुनेछ। सवारि साधनको व्यापार व्यावसाय सुरु गर्दा भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ ।
सिहं : समाजमा गुमेको साख फिर्ता हुनुको साथै आफ्नो बर्चस्व बढाउन सकिनेछ । समयको भरपुर सदुपयोग गरि भाग्य बृद्धि गर्न सकिने साथै दिगो फाईदा हुने काम आरम्भ गर्न सकिने छ । नियमित काममा दाजुभाई तथा आफन्तको सह योग हुने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । छोटो,रमाईलो तथा उपलब्धिमुलक यात्रा हुने अधिक सम्भावना रहेको छ ।
कन्या : असजिलो परिश्थितिहरुलाई बुद्धिमता पुर्वक सहजतामा ढाल्न सकिनेछ । माया प्रे’मको गाठो कसिलो हुनेछ भने जीवन साथिको सहयोगले उत्पादन मुलक काम गर्न सकिने छ । पारिवारि सभा समारोहका सहभागि भई मिठो मसिलो भोजन ग्रहण गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ । कलाकारित तथा फिल्मी क्षेत्रमा समय लगानि गर्नेहरुलो नाम तथा दाम दुबै कमाउने ग्रहयोग रहेकोछ । कुटुम्बसँग कुनै पनि कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला सामान्य म’नमु टाब सिर्जना हुनेछ ।
तुला : सबैको सहयोग पाईने हुनाले काम गर्न जोस जागर आउँनेछ । सामाजिक काममा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे धन संग्रह गर्न सकिनेछ । बिद्यार्थीहरुले मेहनेत गरि राम्रो नतिजा हात पार्न सक्नेछन् । माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने परिवार तथा आत्मिय मित्रमा साथ रमाईलो यात्रा हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ ।
बृश्चिक : बिदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने बिदेशि सामानको व्यापार फस्टाएर जाने छ । स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यावसायमा अरुदिन भन्दा अलि बढि समय खर्चिनु पर्नेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले क्षमता प्रदशन गरेर नाम तथा दाम दुबै कमाउँन सकिनेछ । अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडि छोडेर अग्र पंतिमा आउँन सकिनेछ दुख सुखमा साथ दिनेहरु प्रशस्त भेटिनेछन् ।
धनु : आफन्त तथा दाजुभाईसँग सामान्य कुरामा राज बाजिनेछ भने सम्यमित नभए अप्रिय भट्ना घ’ट्न सक्छ । सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ । आफुलाई सहयोग परेको बेला सहयोग गर्नेहरु कमै भेटिनेछन् । पढाई लेखाईमा प्रशस्त समय खर्चिएपनि भनेजस्तो नतिजा आउनेछैन । लगानि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने केहि समय पर्खनुनै उचित हुनेछ ।
मकर : पुराना समस्याहरु समाधान गरि आम्दानिका स्रोत हरु बढाउन सकिने छ । स’त्रु प’रास्त हुनेछन् भने आफ्नो क्षेत्रमा बर्चस्व कायम राख्न सकिने तथा पहुच बिस्तार गर्न सकिने छ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईको काममा सहयोग हुनेछ । परिवार तथा आफन्तको साथ पाईने हुनाले काम गर्न सहयोग पुग्नेछ । नोकरि तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका चु’नौतिहरुलाई चिर्दै गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । पुराना कामहरु सम्पन्न हुने तथा राम्रो कमाई हुने हुँदा थप लगानि बढाउँन सकिनेछ ।
कुम्भ : नयाँ काममा हात हाल्ने समय रहेपनि उपलब्धि भने ढिला मात्र प्राप्त हुनेछ । लामो दुरिको यात्राको सम्भावना रहेपनि यात्राका क्रममा ध्यान दिनुहोला झ’न्झट हुन सक्छ । पढाई लेखाईमा समय खर्चिए पनि भनेजस्तो रिजल्ट नआउने योग रहेकोछ । अरुकै काममा समय जाने हुनाले आफ्नो काम थाति रहनेछ । अ’ध्यात्म तथा धा’र्मिक क्षेत्र समय खर्चिए केहि लाभ हुनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अनाबश्यक ढिला सुस्तिको चपेटामा परिनेछ ।
मीन : पुराना लगानि गरिएका रकमहरु उठ्नाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाटो खुल्नेछ । माया प्रे’ममा एक अर्कालाई केहि समय शंका तथा अबिश्वास गरेपनि अन्तत बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने समाज सेवामा पनि समय खर्च हुनेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ भने बिदेशमा बसेर प्राविधिक शिक्षा अध्ध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने समय फलदायि रहेकोछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
No Comments on प्रेमी र साथीसँग मिलेर श्रीमानको ज्या’न लिने महिला सहित ३ जनालाई नै गाउँले मिलेर सि’ध्याए
नेपालमा आज थप ११ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ४०१ पुग्यो
No Comments on नेपालमा आज थप ११ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ४०१ पुग्यो
काठमाडौँ- कोरोना संक्रमणबाट थप ११ जनाको मृ’त्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्या’न गु’माउनेको संख्या ४०१ पुगेको छ ।यसअघि शुक्रबार (हिजो) ७ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृ’त्यु भएको थियो ।
शुक्रबार मोरङ र काठमाडौँका २/२, ललितपुर, भक्तपुर र नवलपरासीका १/१ जनाले ज्या’न गुमाएका थिए । बिहीबार कोरोनाका कारण नेपालमा ४ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । त्यसअघि बुधबार कोरोनाका कारण ८ जनाको मृ’त्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो ।
त्यसैगरी गत मंगलबार ११ जनाको कोरोनाका कारण ज्या’न गएको थियो भने सोमबार एकैदिन १५ जनाले कोरोनाका कारण ज्या’न गुमाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार गएको आइतबार भने कोरोनाका कारण ९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । गत शनिबार १४ जनाको कोरोनाका कारण ज्या’न गएको थियो । कोरोनाकै कारण गएको शुक्रबार ५ जनाको कोरोनाले मृ’त्यु भएको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आज ७ सय ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
No Comments on काठमाडौँ उपत्यकामा आज ७ सय ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा थप ७ सय ११ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये काठमाडौंका ५ सय ७०, ललितपुरका ५८ जना र भक्तपुरका ८३ जना रहेका छन्।
त्यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट आज थप २ हजार २० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संगै नेपालमा कोरोनाबाट कुल संक्रमितको संख्या ६१ हजार ५९३ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८७१ जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सम्म कोरोना संक्रमण निको भएकाहरुको संख्या ४३ हजार ८२० जना रहेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । यो संगै नेपालमा मृतकको संख्या ३९० पुगेको छ ।